भारतको सेरम इन्स्टिच्यूटसँग ५० लाख कोभिशिल्ड खोप खरीद गर्ने प्रक्रिया रोकिएसँगै नेपालको कोभिड-१९ को खोप अभियान प्रभावित भएको छ।
सरकारसँगै छैन अत्यावश्यक तथ्यांक, नीति-योजना बनाउन अविश्वसनीय आँकडाको भर देशमा योजना र नीति निर्माण गर्न अत्यावश्यक तथ्यांकको अभाव छ। अर्कातिर, भएका तथ्यांक विश्वसनीय छैनन्।
के प्रहरीले बरामद गरेको वस्तु बहुमूल्य युरेनियम नै हो त?
शुक्रबार प्रहरीले काठमाडौंबाट करीब साढे २ केजी 'युरेनियम–२३८' बरामद गरेको समाचार आइरहँदा बरामद वस्तुबारे विज्ञहरू के भन्छन्?
करको पिरलो : लिन जान्ने फर्काउन नजान्ने सरकार
समयमा कर नतिरे सरकारले जरिवाना तिराउँछ। तर, करदाताले बढी तिरेको कर फिर्ता पाउन अनेक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने मात्र हैन, फिर्ता नै पाउँदैनन्।
चीनले गरीबीविरुद्धको लडाइँ कसरी जित्यो ? चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो देशबाट गरीबी उन्मूलन गरेको घोषणा गरेका छन्। विगत आठ वर्षमा करीब १० करोड नागरिकलाई गरीबीबाट मुक्त गरेको चीनको दाबी छ। तर, चीनले गरीबी मापदण्डका लागि बनाएको आधारमा कतिपय विश्लेषकले शंका गरेका छन्।
कसले चलाउँछ सिंहदरबार ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू राजनीतिक दौडधुपमा व्यस्त हुँदा देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार शिथिल र लथालिंग बनेको छ।
'विकासे' बिउको जगजगीले रैथानेलाई संकट, बिउ ब्यांकबाट पुनर्जीवनको आशा किसान र सरकार दुवैको हेलामा परेको रैथाने बिउबिजन हराउँदै जानु स्वाद र पोषण नाशिनु मात्र होइन, जैविक विविधताका दृष्टिले जोखिमपूर्ण र भविष्यको खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले चिन्ताजनक पनि हो।
हिउँदमा बिजुली अभाव, वर्षायाममा ७०० मेगावाट खेर जाने जोखिम भारततिर निर्यात गर्ने विषय टुंगो नलागे आगामी वर्षायाममा देशभित्र उत्पादित बिजुलीको एक तिहाइ खेर जाने जोखिम छ।
कहाँ हरायो हिउँदे झरी ? यो वर्ष हिउँदमा अहिलेसम्म पानी नपर्दा कृषि उत्पादनमा कमीदेखि डढेलोसम्मको जोखिम बढेको छ। यसपटक प्रि–मनसुनमा पनि पानी कम पर्ने मौसमविद्हरु बताउँछन्।